ကိုယ့်ချစ်သူ ပျော်မယ်ဆိုရင် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ရဲတာ မိန်းမသားတွေရဲ့ အချစ်မို့ပါ
April 13, 2021 by Achawlaymyar
ကိုယ့်ချစ်သူ ပျော်မယ်ဆိုရင် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ရဲတာ မိန်းမသားတွေရဲ့ အချစ်မို့ပါ တဖက်သတ်အချစ်ဟာ စိတ်မထားတတ်ရင် ပူလောင်လွန်းလှပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်လူဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မသေချာသေးဘဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ချစ်နေတာမျိုးက ပြုတ်ကျမလား၊ မပြုတ်ကျဘူးလားလို့ ဝေခွဲမရတဲ့ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေရသလိုပါပဲ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့။ တဖက်လူက ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါမှာတော့ လှပ်ခနဲ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး အသိမ်းခံလိုက်ရသလို ကိုယ်က ကြိုးတန်းပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျတော့တာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်တဖက်သတ်ချစ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို တဖက်လူကပြန်မချစ်နိုင်ဘူးလို့သိသော်လည်း စိတ်ဘယ်လိုထားမလဲ။ ကိုယ့်တဖက်သတ်အချစ်ကို ဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူပျော်ပါစေ။ ကိုယ့်ကိုချစ်မှ သူပျော်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးဆိုမှတော့ သူဘယ်ပျော်ပါ့မလဲ၊ သူပျော်တဲ့နေရာမှာနေပါစေ၊ သူပျော်တဲ့သူနဲ့နေပါစေလို့တွေးကြည့်လိုက်တာ ကိုယ့်အတွက်ပိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲသူ့ကိုချစ်နေတဲ့စိတ်လေးပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် တဖက်သတ်ချစ်တဲ့စိတ်ကို စိတ်ထဲမှာပဲထားပါ။ သူပျော်ပါစေ။ သူပျော်နေတာကို ကိုယ်ကလိုက်ပျော်ကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်သက်သာရာရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နဲ့နေလိုသူမပျော်ရင် … Read more
ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်မိနေတယ်ဆိုရင် သိသင့်တာလေးများ
April 13, 2021 April 13, 2021 by Achawlaymyar
ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်မိနေတယ်ဆိုရင် သိသင့်တာလေးများ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကို ချစ်ပေမဲ့ သူစိတ်ကြီးတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကောင်မလေး စိတ်ကျေနပ်အောင် လိုက်လျောအလျော့ပေးရတာများလာရင် ကောင်လေးတွေက ငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ ဒီအချစ်ရေးကိုလည်း အဆုံးမသတ်ချင်ဘဲ ကိုယ့်အပေါ် မကြာခဏ ဆူပူအော်ဟစ်တာ၊ အကြောင်း မရှိအကြောင်းရှာပြီး ရစ်တာတွေကို အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြိုးစားကြည့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ သူက ကိုယ့်အပေါ် အရင်ကရော အလိုမကျဖြစ်လေ့ရှိလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ အရင်က မဖြစ်ဘဲ အခုနောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်လာတာဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် အရင်မေးကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကရော တကယ်ပဲ သူ့အပေါ်မှာ စတွေ့တုန်းကအတိုင်း ခံစားချက်ရှိရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ မသိစိတ်က အရမ်းကို ထူးဆန်းပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ် အချစ်စိတ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် မသိစိတ်က အလိုလိုခံစားမိပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု ရနေတတ်ပါတယ်။ … Read more
အသက်ငယ်တဲ့ မောင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ မမတွေသာ ရရှိမယ့် ကောင်းကျိုးများ
အသက်ငယ်တဲ့ မောင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားတဲ့ မမတွေသာ ရရှိမယ့် ကောင်းကျိုးများ အချစ်ဆိုတာ အချိန်နေရာမရွေး အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးမို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီ းနှလုံးသားကို မငြင်းဆန်လိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့ကောင်လေးကို ကြိုက်မိတာဟာ အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ သူများတွေပြောသလို မိန်းကလေးဆိုတာ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူကိုပဲ ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကိုခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပါ။ ငယ်တဲ့သူတိုင်းလည်း ဆိုးတာ မဟုတ်ဘဲ ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေလည်း ရှိနိုင်တာမို့ မောင်လေးတွေနဲ့တွဲရင် ဘယ်လိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ (၁) ကိုယ့်ကိုအမြဲရင်ခုန်ရအောင်လုပ်ပေးမှာပါ အသက်ငယ်တဲ့သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ ကိုကိုတွေလို ရုပ်တည်ကြီးတွေနဲ့ မဟုတ်တာကြောင့် စကားအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ရင်ခုန်အောင် ခဏခဏလုပ်မှာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြောလေးတွေ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ မမတွေကို ဆွဲဆောင်ထားမှာပါ။ ကိုကိုတွေဆိုရင် အဲ့လိုလုပ်ရတာရှက်တယ်လို့ပြောပြီး ခပ်တည်တည်ပဲနေပါလိမ့်မယ်။ (၂) ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ချစ်လို့ရတယ် မောင်လေးဆိုမှတော့ မမတွေကိုအသေချွဲပြီး ကလေးလိုလည်းဆိုးတော့ … Read more
ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ …?
ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ …? “ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ” လို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မေးပါတယ် …။ ” ဒီတော့ မေတ္တာပို့ပါ ” လို့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် …။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက် အေးချမ်းပါစေ …။ ဘေးအန္တာရယ်တွေ ဝေးကွာပါစေ …။ စိတ်မဆင်းရဲရ ပါစေနဲ့ …။ ခန္ဓာ့ဆင်းရဲကို မခံစားရပါစေနဲ့ …။ လုပ်ငန်းတွေလည်း အောင်မြင်ပါစေ …။ ကြံစည်တိုင်း ဖြစ် ထွန်းပါစေ …။ လူမိုက်တွေ ရန်က ကင်းဝေးပါစေ …။ သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာ ဆုံတွေ့ပါစေ … စတဲ့ မေတ္တာတွေ ပေးပို့လိုက်ပါ …။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံးယာဉ်ဟာ စိတ်ဖြစ်သလို ခွန်အားအကြီးဆုံးကလည်း စိတ်စွမ်းအင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … Read more
မဖောက်ပြားရုံ မသောက်စားရုံနဲ့ ယောကျ်ားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်တာလား
မဖောက်ပြားရုံ မသောက်စားရုံနဲ့ ယောကျ်ားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်တာလား မဖောက်ပြားရုံ မသောက်စားရုံနဲ့ ယောကျ်ားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်တာလား ။အဲ့ဒါရှိဖို့လိုအပ်သလို အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲ မလုံလောက်သေးဘူး ။ ယောကျ်ားလေးတော်တော်များများ ထင်နေကြတာပါ ငါ ဖောက်ပြန်နေလို့လား သောက်စားနေလို့လားဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မကြာခဏ ကြားကြားနေရတာတွေလေ မဖောက်ပြားပါဘူး ပြီးတော့ မေသာက္စားပါဘူး ဒါတွေအတွက် တကယ်လဲကျေးဇူတင်မိသလို ပျော်လဲ ပျော်ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ပဲ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်လို့ရပြီလို့ အထင်ရောက်နေတာတော့ မှားတယ် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့ ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်ဖက်ကလဲ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ် ငွေရှာတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ် ချစ်ပြတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ် ဦးဆောင်တတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ် လမ်းပြတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ် အများကြီးပါပဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အချစ်က အရေးပါသလို ငွေဆိုတာလည်းအရေးပါတာပဲလေ ငွေမရှိတဲ့ … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို အပိုင်ရချင်ရင် သိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ အချက်( ၅ )ချက်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို အပိုင်ရချင်ရင် သိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ အချက်( ၅ )ချက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုရဖို့က နည်းမသိရင်တော့ တစ်ချို့တွေအတွက် ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုရဖို့အတွက် ဇွဲရှိဖို့လိုအပ်သလို တစ်ချို့သော အချက်လေးတွေကိုလည်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုအပိုင်ရချင်ရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ သူမကို အလေးထားကြောင်း ပြသပါ သူမအပေါ် သင်ဘယ်လောက်အလေးထားတယ်၊ ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကို ပြသပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ သူ သင့်ကိုစိတ်မဝင်စားသည့်တိုင်အောင် သင့်ရဲ့နွေးထွေးကြင်နာတတ်မှုလေးတွေက သူမရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို သင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားရှိနေပေးပါ မိန်းကလေးတွေက သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန် ဘေးနားမှာရှိနေပေးတတ်တဲ့ သူတွေကို ပိုသတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုလိုချင်ရင်တော့ အဲဒီ့မိန်းကလေးရဲ့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘေးနားရှိနေပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူမအဝေးကို တွန်းထုတ်နေရင်တောင် လက်မလျော့ပါနဲ့ … Read more
မုန်းတယ်လို့ မပြောပဲ ဝေးခဲ့ဘူးတဲ့ ချစ်သူတွေရှိလား
မုန်းတယ်လို့ မပြောပဲ ဝေးခဲ့ဘူးတဲ့ ချစ်သူတွေရှိလား ကိုယ့်အတွက် ဘာဆိုဘာမှ ခံစားပေးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ သူတယောက်ကို ရင်ဘက်ထဲထည့်ပြီး ချစ်ကြောင်းပြောရတာ တကယ်ကြေကွဲစရာကောင်းပါတယ် ကိုယ်မပြတ်သားနိုင်တဲ့သူကိုမှ အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းပေးပြီး သူရှိရာအရပ်ကို ကျောခိုင်းပစ်ဖို့ကြိုးစားရတာလည်း ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ် တကယ်ဆို..အပျော်ဆိုတာသိသိနဲ့တင် ချောလဲရောထိုင်ရယုံနဲ့ ကျေနပ်နေရတဲ့အဖြစ်ကလည်း ဝဋ်သိပ်ကြီးလွန်းပါတယ် လက်တွဲဖို့ကျ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ လုံလောက်ခဲ့ သလောက် လမ်းခွဲဖြစ်ဖို့ကြအကြောင်းပြချက်လေးတောင် မရေရာခဲ့တာမျိုး ဘဝမှာ ကိုယ်သိပ်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူကို မုန်းဖို့မေ့ဖို့ကြိုးစားရတာ….ခက်ခဲလွန်းပါတယ် Credit Unicode မုန်းတယ်လို့ မပြောပဲ ဝေးခဲ့ဘူးတဲ့ ချစ်သူတွေရှိလား ကိုယ့်အတွက် ဘာဆိုဘာမှ ခံစားပေးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ သူတယောက်ကို ရင်ဘက်ထဲထည့်ပြီး ချစ်ကြောင်းပြောရတာ တကယ်ကြေကွဲစရာကောင်းပါတယ် ကိုယ်မပြတ်သားနိုင်တဲ့သူကိုမှ အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းပေးပြီး သူရှိရာအရပ်ကို ကျောခိုင်းပစ်ဖို့ကြိုးစားရတာလည်း ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ် တကယ်ဆို..အပျော်ဆိုတာသိသိနဲ့တင် ချောလဲရောထိုင်ရယုံနဲ့ ကျေနပ်နေရတဲ့အဖြစ်ကလည်း ဝဋ်သိပ်ကြီးလွန်းပါတယ် လက်တွဲဖို့ကျ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ … Read more
အလကားဆိုတိုင်း ငမ်းငမ်းတက်မလိုချင်နဲ့ ဘယ်အရာမှာမဆိုတာ သူ့တန်ရာတန်ကြေးဆိုတာရှိပါတယ် ။ တစ်ရာတန်တာကို တစ်ရာပေးရသလို တစ်ထောင်တန်ပေးတဲ့အခါ တစ်ထောင်နဲ့တန်တဲ့အရာတွေ ပြန်ရလာတတ်ပါတယ် .. ။ ဘယ်အရာကိုမှ အလကားမလိုချင်နဲ့ အချောင်မလိုချင်နဲ့ … ။ အလကားဆိုတဲ့ အရာတွေအနောက်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေပါလာတတ်တယ် ။ အလကားရတိုင်း မတရားယူနေရင် ကိုယ်ဖက်က ပြန်ပေးရတဲ့ မတန်တဆတွေဖြစ်နေတတ်တယ် … ။ ကိုယ်နဲ့ တန်ရာတန်ရာပေါ့ တန်ဖိုးကြီးတာကို လိုချင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်လဲ တန်ဖိုးမြင့်လာအောင် လုပ်တတ်ရတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်ရတယ် … ။ စေတနာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရတိုင်းယူနေရင် တစ်နေ့ ကျေးဇူးတရားဆိုတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပြီး တစ်သက်ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားရတတ်တယ် … ။ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းတယ်မှတ်လဲ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့အသိ နေရာတော်တော်များများမှာ ခေါင်းငုံ့ခံ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နဲ့ တချို့နေထိုင်နေရတာတွေ ရှိတယ် … Read more
မအားလပ်ဘူး ဆိုခဲ့ရင်တောင် တစ်နေ့ကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျား ချစ်သူဆီ ဖုန်းခေါ်ပါ
မအားလပ်ဘူး ဆိုခဲ့ရင်တောင် တစ်နေ့ကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျား ချစ်သူဆီ ဖုန်းခေါ်ပါ ။ ဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့် ခင်ဗျား ချစ်သူ ရဲ့ “စိတ်ပူခြင်း”တွေကိုလျှော့ချပေးပါ။ ခင်ဗျားအဆင်ပြေ ကြောင်း ခင်ဗျားချစ်သူ သိပါစေ။ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ အပြန်အလှန် အားပေးစကားလေးတွေ ပြောပေးကြပါ ။ “ပတ်ဝန်းကျင်”က အားပေးစကားတွေထက် ခင်ဗျားရဲ့အားပေး စကားတစ်ခွန်းကသာ သူ့အတွက် ပိုထိရောက်စေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါစေ ။ ဆေးလိပ် /ကွမ်း/အရက် စသည် ဖြတ်ခိုင်းလာရင် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီး”ရစ်” တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ သူ့အနားကနေ ခင်ဗျားကိုထွက်သွားခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလေ ခင်ဗျားရဲ့ နာမ်စား လေးကိုလည်း သူ ကြာကြာခေါ်ခွင့်မရမှာ ကြောက်နေတက်တာမျိုးပါ ။ သူ့ကိုယ်သူ ထက် ခင်ဗျားကို ပိုချစ်မိလို့ ဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါစေ။ တခြားသူတွေကပေးတဲ့ … Read more
ဝေဖန်တာကို တုံ့ပြန်ဖို့မလိုပါဘူး ခပ်ပြုံးပြုံးလေးနေ ကြည့်လိုက်ပါ
ဝေဖန်တာကို တုံ့ပြန်ဖို့မလိုပါဘူး ခပ်ပြုံးပြုံးလေးနေ ကြည့်လိုက်ပါ ကိုယ်တိုင်က ဒေါသကြီးတဲ့အထဲမှာပါတာမို့ ကိုယ့်ကိုမဟုတ်မမှန်တာပြောတာ၊ ကိုယ့်အပေါ်မတရားလုပ်တာ၊ ကိုယ့်ကို အနိုင်ကျင့်တာ၊ ကိုယ့်အပေါ်မမုန်မကန်လုပ်လာရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်မှားနေတဲ့အခါ တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးပေမယ့် ကိုယ်မှန်နေတာကိုမှ မတော်မတရားတွေပြောလာရင် သိပ်မခံချင်ကြတာ လူတိုင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါနော်။ ကိုယ်က မှန်နေတဲ့သူလေ….အဲဒီ့အတွက်ကြောင့်ကို ကိုယ်က အေးဆေးပါပဲ။ တဖက်လူက မှားနေတဲ့လူမို့ကို ကိုယ့်ကိုသဲသဲလှုပ် ရန်ရှာနေတာဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့် တချို့အမှားတွေ၊ အမှန်တွေက ကိုယ်တိုင် လေးနကွ်ာ သိထားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ကိုယ်မှန်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံသလို၊ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တိုင်း “ကိုယ်မှ သူတပါးအပေါ်မတရားမလုပ်ထားတာ” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ရှင်းနေမှာပါပဲ။ “ ကိုယ်မှ သူတပါးအပေါ် မတရားမကောက်ကျစ်ခဲ့တာ၊ ကိုယ်မှ သူတပါးကို ခေါင်းပုံမဖြတ်ခဲ့တာ၊ ကိုယ်မှ သူတပါးအပေါ် မယုတ်မာခဲ့တာ၊ ကိုယ်မှ … Read more